V-Nova secures significant investment from Novator Partners XCHARX 2019 NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
Home » News » V-Nova wuxuu maalgashiga maalgashiga maalgashiga ka helay Novator Partners
• Guddoomiye kuxigeenka Thor Björgólfsson wuxuu ku biiraa guddiga maamulka V-Nova.
• Casriyeynta faylasha waxaa ka mid ah dhowr shirkadood oo waaweyn oo ka mid ah Play (Poland), WOM (Chile) iyo Nova (Iceland).
• Maalgashiga wuxuu xoojiyaa oo wuxuu ballaariyaa joogitaanka suuqyada ee xalinta cadaadiska PERSEUS.
Si gaar ah ayaa loo qabtaa V-Nova Limited, oo ah hoggaamiye hormuud ah oo xalal fiidiyoow ah, maanta ayaa ku dhawaaqay in ay xaqiijisay maalgashi lacageed oo badan oo miisaaniyad ah si kor loogu qaado kororka ganacsiga. Shirkadda cusbitaallada casriga ah ayaa ballaarin doonta kooxdeeda cilmi baarista iyo horumarinta si ay u sii xoojiso codsigeeda PERSEUS ee codsiyada ka jirta qaybaha kala duwan ee warshadaha iyo ballaarinta hawlahooda ganacsi caalami ahaan si ay u sii xoojiyaan gelitaanka suuqa.
Ganacsatada caanka ah ee Iceland Thor Björgólfsson, Guddoomiyaha shirkadda maal-gashiga ee Novator, ayaa hogaaminaya maalgelinta wareega wuxuuna ku biiri doonaa guddiga V-Nova. Björgólfsson wuxuu khibrad badan u leeyahay qaybaha muhiimka u ah V-Nova oo ay ku jiraan maalgashiyadiisa iyo ka qaybqaadashada dhowr shirkadood oo waaweyn oo ka mid ah Play (Poland), WOM (Chile) iyo Nova (Iceland).
"Adeegyada video-ga ee adduunka oo dhan waxay ku dadaalayaan inay bixiyaan fiidiyo tayo sare leh oo sii wanaajiya si ay u sii ahaadaan tartan suuqa oo aad u badan," ayuu yiri Thor Björgólfsson. "Waxaan si aad ah u soo jiitay PERSEUS awood u leedahay inay wax ka qabato baahiyaha dhabta ah ee dadka ka shaqeeya. Waa farxad in hadda la shaqeynayo Guido iyo kooxda tayada leh. "
"Maalgashadaan muhiimka ah micnaheedu waa inaan sii wanaajin karno dadaalkeena horumarinta iyo dadaalka iibinta," ayuu yiri Guido Meari, oo ah madaxa shirkada iyo aasaasaha V-Nova. "Inkastoo Thor iyo kooxda Novator-ka ay ku lug leeyihiin sidoo kale waa mudaaharaad weyn oo khibrad iyo khibrad u leh V-Nova waxaana rajeyneynaa inaan wadajir u shaqeyno bilaha soo socda."
V-Nova waxay horay uga tirsantahay maalgashadeeda, hoggaamiyeyaasha caalamiga ah sida Eutelsat iyo Sky Group. V-Nova waxa kale oo uu soo iibsaday miisaankii guud ee caalamiga ahaa ee Faroudja Enterprises Inc. bishii January 2017.
Densitron Demonstrates Leadership in Advanced Displays, Control and Broadcast Interface Solutions - February 18, 2019
Mediaproxy To Show New Exception-Based Monitoring and Content Matching Workflows at NAB 2019 - February 4, 2019
Xalalka isdabajinta Novator Guddoomiyaha Cusub Novator Investment FADLAN Thor Björgólfsson V-Nova V-Nova Investment video Streaming	2018-10-18
Previous: KHQ-TV Supercharges Dijital Video ah oo leh FUEL, Xarunta Dhexe ee Cirka Dhibaatada Xawilaadda